Hal Laba Saddex Koronto Co., Ltd.
Mid ka mid ah laba saddex koronto Co., Ltd. waxay ku taalaa Yueqing, Gobolka Zhejiang, caasimada Shiinaha ee qalabka korontada, shirkadan waa soo saare heer sare ah oo ku takhasusay horumarinta iyo soo saarida qalabka korontada ku shaqeeya ee hooseeya sida kiiska mashiinka wareega , Qalabka wareegga hawada, wareegga wareegga yar, kala-baxa wareegga wareegga, xakamaynta iyo ilaalinta qalabka, laba-koronto oo is-beddelasho otomaatig ah, go'doomin go'doomin iyo wixii la mid ah. Waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan R&D iyo wax soo saar. Iyada oo dhowr teknoolojiyad patenti ah Shahaadada, alaabooyinka waxaa caddeeyay GB, CE, CCC, iwm.
Shirkaddani waxay u qaadataa maareynta sayniska inay tahay udub-dhexaadka, waxay u qaadataa baahiyaha isticmaalaha, tayada wax soo saarka iyo adeegga taxaddarka ah ee xarunta fikradda ganacsiga, si loo daboolo baahida macaamiisha ee suuqyada kala duwan iyo goobaha codsiyada kala duwan, si loo bixiyo waxqabadka ugu sarreeya
U hogaansanaanta qiimaha ixtiraamka dadka, horumarinta kartida aadanaha, iyo raacitaanka nafta dadka oo ah ujeedada shaqada, shirkadeena, dadka caadiga ah waxay noqon doonaan dad heer sare ah, qulqulka joogtada ah ee dadka halkan ku nool waxay rumeeyaan riyooyinkooda nolosha, kobciyaan koox tayo sare leh oo ku guuleysata hogaaminta suuqa, waxaan abuurnaa faa iidooyin urureed, waxayna hogaamineysaa jihada qiimaha, waxaan leenahay dareen hadaf iyo kooxda mas'uuliyadda, waxaanan taageereynaa xaqiijinta yoolalka istiraatiijiyadeed iyo hiigsiga hibada.
Shirkaddu waxay daryeeshaa shaqaalaha dhinacyada nolosha, shucuurta iyo koritaanka.
Shaqaalaha shirkaddu waxay qaddariyaan riyadooda gudaha iyo raadintooda. Sababtoo ah waxay leeyihiin riyooyin, way ka firfircoon yihiin, hal-abuurnimo leeyihiin, waxayna leeyihiin awood dhaqaajin oo ay kaga sarreeyaan ururada kale iyo shaqsiyaadka kale si loo hagaajiyo boqortooyada masraxa.
KOOXDA FARSAMADA R&D
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay koox farsamo & rd ah oo ka badan 70 qof, oo ay ku jiraan 2 injineer sare, 8 injineero mashruuc, 13 injineero sare, 28 injineero iyo 29 shaqaale kale.
Shirkaddu waxay u hoggaansantaa hal-abuurka sayniska iyo farsamada, waxay had iyo jeer soo bandhigtaa shaqaale xirfadlayaal ah, waxaa ka go'an inay horumariso ammaan, kalsooni, caqli, tamarta-keydinta waxyaabaha korantada iyo xalalka macaamiisha.
Shirkaddu waxay leedahay wadashaqeyn ballaaran oo ay la leedahay hay'adaha sayniska iyo teknolojiyadda, kulliyado xirfadlayaal ah iyo khubaro farsamo, iyadoo horumarinta alaabooyinka cusub ay yihiin udub-dhexaadka, ayna si joogto ah kor ugu qaadaan horumarka tikniyoolajiyadda.
Kooxda Cilmi-baarista Farsamada
FARSAMADA FARSAMADA R&D INVESTMENT
Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay diiradda saartay cilmi-baarista tikniyoolajiyadda iyo maaraynta horumarinta ee alaabooyinka oo ah hawl muhiim ah. Dhinaca kale, waxay si xoog leh ugu ololeysaa cilmi baaris madax-bannaan iyo horumarin, iyadoo lagu saleynayo qaabeynta qaab-dhismeedka hannaanka, u hoggaansanaanta suuqa u janjeedha, faa iidada u leh, waxay xoojineysaa cilmi-baaris madax-bannaan iyo horumarin, waxay xoojineysaa cilmi baarista tikniyoolajiyadda dalabka, waxay si firfircoon u horumarisaa alaabooyinka leh qiime sare oo dheeri ah , waxyaabaha tikniyoolajiyadda sare iyo suuqgeynta, iyo tan kale.
Dhinaca kale, waa inaan si firfircoon u ballaarinnaa iskaashiga aan la leenahay hay'adaha cilmi-baarista sayniska, kulleejooyinka xirfadleyda iyo khubaro farsamo, siiya ciyaar buuxda oo ku saabsan faa'iidooyinka teknoolojiyadda, aan wax ka barano midba midka kale awoodiisa isla markaana ka dhigno midba midka kale daciifnimadiisa, si joogto ah kor ugu qaadno horumarka tikniyoolajiyadeed, Waxaa ka go'an horumarinta amniga , alaab koronto lagu kalsoonaan karo oo caqli badan iyo xalka macaamiisha.
Sanadihii la soo dhaafay, waxqabadka iibka ee shirkaddu wuxuu hayey koritaan deg deg ah, iyadoo kordhinaysa saamiga maalgashiga R&D ee teknolojiyadda sannadba sanadka ka dambeeya.
Qalab heer sare ah
si loo hubiyo heerka qalabka ee shirkadda, shirkaddu waxay si firfircoon u soo bandhigaysaa qalabka wax soo saarka caalamiga ah iyo qalabka wax lagu tijaabiyo, waxay xoojineysaa cilmi baarista kalsoonida iyo tijaabada, shirkaddu hadda waxay leedahay sifooyin dhaqdhaqaaq caqli gal ah sariirta, khadka ogaanshaha otomaatiga ah, saxnaanta isku-duwaha qalabka wax lagu cabbiro, qalabka microscope-ka guud iyo kuwa kale. soosaarida iyo qalabka baaritaanka Shirkadu waxay sameysay xarun tijaabo oo balaaran, oo ay kuxirantahay sheybaarka makaanikada, sheybaarka waxsoosaarka, sheybaarka EMC, sheybaarka caadiga ah iyo qalabka kale ee heerka-koowaad ee dalka iyo qalabka loo adeegsado isticmaalka, hagaajinta waxsoosaarka wax soosaarka ee shirkadda, hubinta tiknoolajiyadda wax soo saarka ee joogtada ah iyo tayada maaraynta tayada.
Macaamiil Iyo ADEEG
Waxaa naga go'an inaan siino tayo iyo alaabo iyo adeegyo tayo leh, waxaanna si firfircoon u baareynaa baahida macaamiisha;
Waxaan ku dhiirigelinaynaa dad badan inay ka qaybqaataan hal-abuurnimo qaab furan, iskudirno teknoolojiyad cusub oo leh moodallo ganacsi oo heer sare ah, oo aan si joogto ah u abuurnno waxyaabo lala yaabo.
Waxaan ahmiyad weyn siinaynaa khibrada iyo fikradaha macmiilka, waxaan si joogto ah u wanaajinaa nidaamka maaraynta xiriirka macaamiisha, si wadajir ah ayaan ula kornaa macaamiisha, waxaanan u tixgalineynaa nidaamkan qiimaha lagu gaarayo heer sare